သငျသညျနားထောငျခငျြဖြစ်စေမပြုလုပ်လုံလောက်စွာကွိုတငျပွငျဆငျနှင့်တူသောစမ်းသပ်မှုအပေါ်တကယ်ကောင်းစွာဂိုးသွင်းဖို့လပေါင်းများစွာကြာ ACT , SAT , GRE နှင့်အခြားစံမြင့်လောင်းကြေးစမ်းသပ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ကရိုးရိုးသီအိုရီအစမ်းသပ်မှုမတိုင်မီတစ်ပါတ်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းသို့ပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်နိုင်မူသောသင်တို့အကြောင်းအရာအသိပညာ, စမ်းသပ်ရန်မဟုတ်ပါ။ (ဆိုလိုသည်မှာ်နယ်ရေဂင်ရဲ့စာနယ်ဇင်းအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်ဘယ်သူနည်းသင်မည်သို့ပွငျသစျထဲတွင် "ပပျောက်ရေး" ဟူသောစကားလုံးဖြစ်သည်ဆိုကြ?) စံစမ်းသပ်မှုမကြာခဏအကြောင်းပြချက်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာ။
ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ အခြ။ ကောက်ချက်ဆွဲပါ။ နှင့်သင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်ကျောင်းကအသက်တာ၌, သင်သူတို့အားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမှာပိုကောင်းရရှိရန်အလို့ငှာ, သငျသညျနံနကျစောစောနှင့်မကြာခဏသူတို့အပျေါမှာထတိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထပ်ဖြစ်မှုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်စမ်းသပ်ဖို့ရက်သတ္တပတ် mimicked မရနိုင်ပါ။
ဒါဟာ Fix: တစ်လေ့လာမှုအချိန်ဇယားကိုလပေါင်းများစွာကသင်၏စာမေးပွဲမတိုင်မီအတူတူထား Get ။ သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်သို့လေ့လာမှုကြိမ်ရေးချနှင့်ခိုင်မြဲစွာသူတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးလွန်။ သင်တို့ကို "တောင်ပံက" တတ်နိုင်သမျှစိတ်ကူးသွားနှင့်သင်ချင်ပါတယ်ရမှတ်ရကြပါစို့။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့အဓိကစမ်းသပ်မှုများအတွက်အစောပိုင်း prepping ကျေးဇူးတင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကတိပေး!
ဤသူသည်သင်တို့မှသတင်းဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသိလာကြတယ်။ အချို့လူများကအဖြူဆူညံသံဟုသတ်မှတ်နားကြပ်နှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မှတ်စု rehashing, တိတ်ဆိတ်တဲ့ထောင့်တစ်စားပွဲခုံမှာထိုင်လျက်ကယ့်ကိုကောင်းစွာပစ္စည်းသင်ယူကြသည်။ အခြားလူတစ်ဦးအုပ်စုတွင်အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူ! သူတို့ကရယ်မောလမ်းတစ်လျှောက်နောက်နေ, အဆွေခင်ပွန်း quizzed ခံရဖို့ချင်တယ်။
တချို့ကလည်းသူတို့အတန်းပြန်လည်သုံးသပ်၏စံချိန်တင်ဟောပြောပွဲ play နေချိန်မှာနောက်တဖန်ကျော်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မှတ်စုရိုက်ကြိုက်တတ်တဲ့။ သင်သည်သင်၏သင်ယူမှုစတိုင်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါကြောင်းလမ်းအတွက်သင်ယူဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲကျရှုံးရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကို Doom ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ Fix: အသင်ယူမှုစတိုင်များပဟေဠိကိုယူပါ။ သေချာတာပေါ့, သို့ရာတွင်နှင့်မ 100% သိပ္ပံနည်းကျရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကသင်ကိုအကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူဘယ်လိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးကူညီလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးဆိုရင်အထဲက Find အမြင်အာရုံ , kinesthetic သို့မဟုတ် အာရုံ သင်ယူသူနှင့်အမှန်တကယ်ကိုသင်လေ့လာသင်ယူကိုကူညီနိုင်မယ့်လမ်းအတွက်ပြင်ဆင်လော့။
သငျသညျသငျ၏စာမေးပွဲများ၏ Ins နှင့်တနေရာကိုလေ့လာပါမနေပါနဲ့
သင် ACT သည့် SAT ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုငါသိ၏ခဲ့သလား သင့်ရဲ့ ဝေါဟာရပဟေဠိ သင့်ရဲ့ထက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဖြစ်မယ့် လယ်စာမေးပွဲတွင် ။ သငျသညျအတော်လေးသငျသညျစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပေါ်ဖမ်းမိကြပြီမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲပျက်ကွက်ပါတယ်။
ဒါဟာ Fix: သင်ကျောင်းကတစ်ဦးကိုစမ်းသပ်တာဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ဆရာကနေဖွစျလိမျ့မညျစာမေးပွဲအမျိုးအစားကိုထွက်ရှာတွေ့ - မျိုးစုံရွေးချယ်မှု? စာစီစာကုံး? ဒါကြောင့် အကယ်. သင်ကွဲပြားခြားနားကွိုတငျပွငျဆငျပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦး Get အဆိုပါ ACT အဘို့စမ်းသပ် prep စာအုပ် သို့မဟုတ် SAT နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ်များအတွက်မဟာဗျူဟာလေ့လာပါ။ သငျသညျကြိုတင်စမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုအကြောင်းအရာနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ် familiarizing အားဖြင့် (အသေးစိတ်အချက်များကိုဝင်ငွေမှဦးဆောင်သော) အချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုမျှစမ်းသပ်စိုးရိမ်စိတ်ထက်ပိုဆိုးသည်။ ကောင်းပြီ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးမွေးဖွား။ ဒါမှမဟုတ်ငါးမန်းစားခံရ။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ဘာမှစမ်းသပ်စိုးရိမ်စိတ်ထက်ပိုဆိုးသည်။ သငျသညျအခြားဘာမျှမစဉ်းစားနိုင်စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီနေ့ရက်ကာလအဘို့။ သငျသညျဖြောင့်အသင်းအဖွဲ့ချုပ်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖိအားပေး။ NOTHING - - ပြီးပြည့်စုံရမှတ် မှလွဲ. ကိစ္စရပ်များနှင့်သင် sweated နှင့်မင်္ဂလာဖြစ်စေခြင်းနှင့်မျှော်လင့်နှင့်သင့်လာမည့်စာမေးပွဲကိုကျော် despaired င့်သင်ဘာမျှမဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Fix: အလေ့အကျင့်ဖို့ခြေလှမ်း သင့်ရဲ့စားပွဲခုံကနေစမ်းသပ်မှုစိုးရိမ်စိတ်ကျော်လွှား ညာဘက်စာမေးပွဲဖြေဆိုမီ။ ကြောင်းမကူညီပါဘူးဆိုရင်, သင့်စိတ်ကူးဘဝတစ်ဦးအချိန်ဇယားဆွဲပါ။ (မွေးဖွားခြင်း - 115 နှစ်ရှိပြီမှာမရဏ။ ) ပေါ်မှာအဓိကဖြစ်ရပ်များ Place: ပထမဦးဆုံးလမ်းလျှောက်ဖို့သင်ယူ; တစ်ဦးဘိုးဘွားဆုံးရှုံးခဲ့ရ; လက်ထပ်; သင့်ရဲ့ 17 သားသမီးများ၏ကလေးမွေးဖွား; နိုဘယ်လ်ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့သင့် timeline ပေါ်မှာသင့်စမ်းသပ်မှုရက်စွဲတစ်ခုအလွန်သေးငယ်သောအစက်ထားပါ။ ယခုပြုလုပ်မဒါကြီးမားပုံရသည်မဟုတ်လော စမ်းသပ်အာရုံကြောနှင့်တကွသင်စရာတွေစေနိုငျသျောလညျးကရှုထောင့်ထဲသို့သွင်းထားရန်ကူညီပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ခေါနီးပေါ်မှာမှတ်မိကြမည်နည်း မြင့်မားမဖြစ်နိုင်။
အခု - ဒီတစ်မိနစ် - ဆင်းရဲသောစမ်းသပ်-taker ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းရပ်တန့်။ တစ်သိမြင်ပုံပျက်ခေါ်တံဆိပ်, သင်သိသည် သာ. အပြစ်မ!
သင်ကိုယ်တိုင်သင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ယုံကြည်မည်သို့ပင်။ သငျသညျယူနှင့်အတိတ်ကာလစမ်းသပ်မှုကျရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်ရင်တောင်သင့်ရဲ့အနာဂတ်စမ်းသပ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတစ်ဦးကိုအာမခံပျက်ကွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအတိတ်ကာလသူများစမ်းသပ်မှုအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအမှားတွေကိုထုတ်ပုံ (ဒီတစ်ခါလည်းသင်? ဒီတစ်ခါလည်းသင်စမ်းသပ်မဟာဗျူဟာလေ့လာသင်ယူသည်မဟုတ်လောဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျအလုံအလောက်အိပ်မရခဲ့တာလဲလေ့လာခဲ့ပါဘူး) နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နေဖွငျ့ဤစမ်းသပ်မှုကျောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေး ။
ဒါဟာ Fix: အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း 30 ကြိုတင်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်, စကားမြားကိုရေး "ငါသည်အလွန်ကြီးစွာသောစမ်းသပ်-taker ရယ်!" အပေါ် Post-ယင်း၏နှင့်နေရာတိုင်းသူတို့ကိုကပ် - သင့်ရေချိုးခန်းမှန်, သင့်ကားရဲ့ဒက်ရှ်ဘုတ်, ကျောင်းအဘို့သင့်စာအုပ်ချုပ်သမား၏အတွင်းပိုင်း။ Nerdy ပေမယ့်လုံးဝတန်ဖိုးရှိ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်၏နောက်ကျောအပေါ်ရေးပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ screensaver နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာစကားဝှက်ကိုလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လာမယ့်လများအတွက်နေထိုင်ကြသည်နှင့်သင်အတိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ပေးထားပါတယ်တံဆိပ်ကိုကျော်လွှားရန်စတင်ဖြည်းဖြည်းသင့်ဦးနှောက်ကိုကြည့်ပါ။
Visual သင်ယူသူ6လေ့လာမှုသိကောင်းစရာများ
Amelia Earhart ကိုအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် Timeline ကို: ပျောက်ဆုံးမှုမှမွေးဖွားခြင်း
FAMU, ဖလော်ရီဒါ A & M တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ကိုယူခဲ့ ယူ. ခေါ်ယူရယူပါ
ပြင်သစ်ပုဒ်ဖြတ် Marks နှင့်သင်္ကေတများအတွက်အမည်များ
ကမ္ဘာ့ဖလား Cup Winners
PGA Tour RBC ကနေဒါပွင့်လင်း
ဘယ်လို Fortune မဂ္ဂဇင်း Teller အံ့ဖွယ်ငါးလုပ်ငန်းခွင်ပါသလား
အဆိုပါ2အဖြစ်များသည့်မြောက်အမေရိက Ash ကိုသစ်ပင်များ
လက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသစ်တောအမျိုးအစားနှင့် Density Maps ကို
လေ့လာရေးက Black အမျိုးသမီးများနေ့ White ကအမျိုးသမီးများထက်အဆင့်မြင့်အလေးချိန်မှာကျန်းမာဖြစ်ကြောင်းပြရန်
Chip Shots အပေါ်သင့်ရဲ့ရလဒ်များပိုမိုကောင်းမွန်စေမဖို့ 6-8-10 Method ကိုလေ့လာပါ
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ Reiki Attunement အဘို့ပြင်ဆင်ပါရန်
တစ်ခိုင်ခံ့သောအက္ခရာပေါ် မူတည်. တစ်ဦးက Short Story ရေးထားလုပ်နည်း
အဆိုပါကြောက်စရာ Amherst Poltergeist